Ndatove mutengi wako. Ndine foni yekumba uye DSL kuburikidza newe (yaimbova SBC). Ini ndinoda sevhisi asi ndinoshuvira kukwidziridza iyo DSL pamwe nekutora mukana weiyo huru TV sevhisi yauinayo. Iwe unoona, furati rangu rinongopa pasuru yekutanga uye ndinoda kusimudzira.
Kwemakore mashoma apfuura, iwe wakatumira mamwe Zvinoshamisa zvinokwezva tsamba yakananga kukumbira kuti ndiwedzere. Ndinovawana kanenge kamwe pamwedzi vakanyorerwa zvakanaka kuimba yangu. Mumwe mwedzi iwe wakatumira izere rine mavara bhuku iro rakatsanangura ese mapakeji eese ari maviri DSL neTerevhizheni. Makandibata… ndakatengeswa! Ini ndoda kukwidziridzira kuU-Verse kuti ndione maColts achikunda neSvondo mukubwinya kwavo kwese.
Iyo system inondiudza kuti ini handikwanise kukwidziridza, ini ndine chikwereti cherudzi rwakati rwehuremu hweshure. Nekudaro, ini ndinoribhadhara parunhare nekadhi rechikwereti nekutaipa munhamba dzangu dzese. Unoda kuziva kuti sei usina kundiudza izvi pawebhu peji pandakanopinda mukati ndikakumbira sevhisi.
Iye anoenderera uye achifunga kuti ari kufambira mberi. Ndiri kufara kwazvo. Ipapo kufona kunodonhedzwa.
Hapana anofona back… ndinofungidzira kuti system haina kuteedzera nhamba yangu uye ini handina nzira yekubata Shannah ikozvino kuenderera mberi nekutsvaga. Ndakaedza kufona ndichienda kune anoshanda kechipiri asi ikozvino pakanga paine chekumirira zvakare.
Saka… ndinoshanyira webhusaiti zvakare uye ndosarudza kunyora email. Ini ndinodzvanya Taura nesu pazasi peji uye nyora "Simudzira kuU-Ndima" mumunda uripo. Ini ndinodzvanya kuendesa uye peji rinodzoreredza neayo mashoma e-mail sarudzo pazasi. Ini ndinodzvanya yekutanga e-mail sarudzo ... uye pachinzvimbo cheemail kero kana fomu, ini ndinoratidzwa neiyi link kudzokera kuU-Verse webhu saiti. Ndiyo saiti ini yandaive ndatova.
Zvinoita kuti ndive neshungu yekuziva kana iwe wakamboedza mushandisi-kuyedza newebsite yako kuti uone kuti zvingave nyore kana kuti zvakaoma sei kuti vatengi vako vashandise masevhisi ako epamhepo. Ini ndinoshamisika kuti mangani mazana kana zviuru zvevamwe vatengi vanoda kubhadhara zvakanyanya uye vova vatengi vanokosha kusangano rako - asi vasingakwanise.
Ikoko unayo, AT&T. Ini ndiri (kare) anofara mutengi uyo anoda kukwidziridza account yavo. Ndabhadhara zvikwereti zvangu, ndine mari, uye wanga uchindishambadzira kwandiri kuti uzviite kwemakore mashoma. Iwe unonyatsoda kuti ini ndiwedzere, handiti? Kana ukadaro, yako webhusaiti haina kugadziridzwa, yako yepamhepo yekukurukura haisi kuchengeta, yako system haina kunyatso, uye yako foni system (zvine mutsindo) inogona kunge yadonhedza kufona kwangu.
Ini ndakave nechiitiko chakafanana neu-vhesi. Zvinotyisa. Ndinoda zvakaipa. Ini ndakagamuchira maemail uye kunyangwe telemarketing kufona nezvazvo. Basa harisi kuwanikwa munzvimbo medu. Zvese mune zvese, handisati ndamboona kambani yakaipa kwazvo pakushandira vatengi vayo.
Izvo zvinonzwika senge kunetseka. Wakambopedzisira wawana kukwidziridzwa iwe kwawaitsvaga? Ini pachangu, ini ndaitoda kunamatira neDISH Network sevhisi. Ndave ndiri kunyorera kwenguva yakareba uye nguva pfupi yadarika ndakave mushandi zvakare. DISH ichine yakawanda HD makwara kupfuura chero ani zvake muindastiri pamwe nemadhiri makuru senge HD yemahara yehupenyu. Uyezve pane zvimwe zvinhu zvekufunga nezvazvo, semuenzaniso kuvimbika. Paunenge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchitora zvese zvako zvevaraidzo / kutaurirana masevhisi kubva kune imwechete sosi, kana mumwe aine kubatika, ivo vese vano Zvirinani kana rimwe remasevhisi angu riine hiccup ndinogona kunakidzwa nevamwe.